Iiphaneli zelanga: Yonke into ekhoyo malunga nayo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Ukuhlaziywa okuluhlaza | 01/04/2022 23:14 | Photovoltaic Solar Amandla
Mhlawumbi uvile ngeepaneli zelanga, nangona kunjalo, ayisiyonto esiyibona rhoqo kwaye bambalwa kakhulu abantu abayaziyo indlela abasebenza ngayo. Kule posi siza kuphonononga yonke into ekhoyo malunga nayo iipaneli zelanga, zisebenza njani kwaye zeziphi iingenelo zazo. Masiqale.
1 Ziziphi iiphaneli zelanga ze-photovoltaic?
2 Zisebenza njani iiseli ze-photovoltaic?
3 Zingaphi iintlobo zeeseli ze-photovoltaic ezikhoyo?
4 Ziziphi iingenelo zokusebenzisa iipaneli zelanga?
5 Kutheni kucetyiswa ukusebenzisa ezi panels?
Ziziphi iiphaneli zelanga ze-photovoltaic?
Iiphaneli zesola zisebenza njengomlamli we sebenzisa ukukhanya kwelanga ukunika amandla. Baguqula imitha yelanga ngenxa yempembelelo ye-photovoltaic, ngokusebenzisa iiseli ezininzi, ezibizwa ngokuba ziiseli ze-photovoltaic.
Zisebenza njani iiseli ze-photovoltaic?
Ngokudibanisa le seli yelanga kwisekethe yombane kwaye kwangaxeshanye ufumana imitha yelanga, oku iya kuvelisa intlawulo yee-electron eya kuqalisa ukujikeleza kwaye ivelise intlawulo yangoku.
Zingaphi iintlobo zeeseli ze-photovoltaic ezikhoyo?
Okwangoku, kukho iintlobo ezininzi zeeseli ze-photovoltaic. Uninzi lwezi luyahluka ngokwendlela ezibunjwe ngayo okanye ngobume bazo.
Apha ngezantsi siza kwenza uthelekiso phakathi kweeseli ze-multicrystalline silicon photovoltaic kunye neeseli ze-crystalline silicon.
I-silicon ye-Multicrystalline: Iiseli ze-silicon ye-Multicrystalline zilungile kakhulu ekusebenzeni, nangona kunjalo, iphantsi kancinci kune-silicon yekristale, oku kubonakaliswa ngokucacileyo ekukhanyeni okuphantsi. Ezi zibalaseleyo njengoko zinexabiso eliphantsi kune-silicon yekristale.
ISilicon yeCrystal: Ezi seli zinexabiso eliphezulu kakhulu kunezo zikhankanywe ngasentla, oku kuthetha ukuba ukusetyenziswa kwazo akuqhelekanga. Nangona ixabiso layo liphezulu, kunjalo nokusebenza kwayo kunye nomgangatho.
Ziziphi iingenelo zokusebenzisa iipaneli zelanga?
Ukusuka kwi-imagine Energy, eyokuqala I-100% yenkampani yamandla elanga evela eSpainIifomyula zokusebenzisa amandla ezintsha zisetyenziselwa, ukukhuthaza ukukhula kwamandla elanga ahlaziyekayo 100% ezibophelele kokusingqongileyo. Ngale ndlela, ukuxhomekeka kumandla angcolisayo (afana negesi) kuyancitshiswa. Ndiyabulela kwizisombululo ezifana nezo ze-Imagina Energy, amakhaya okanye iinkampani ezithatha isigqibo sokufakela iipaneli zelanga ziyakwazi ukuvelisa amandla abo kwimithombo yendalo engapheliyo njengelanga.
Kutheni kucetyiswa ukusebenzisa ezi panels?
Yiyo ukhetho olukhulu lokusebenzisa ekhaya nakwiinkampani, kuba yinto enokuthi ifikeleleke ngokupheleleyo kwaye ivelise ukonga okukhulu kwibhili yombane, ngakumbi kwiinkampani.
Ukongeza, kuluncedo olukhulu ukukhathalela okusingqongileyo, ngenxa yokuba amandla awavelisayo I-100% yenziwe ngemitha yelanga. Okwangoku, uphando olwahlukeneyo luyenziwa ukuze kuphuculwe inkqubo kwaye kwenziwe obu buchwepheshe butsha bunike iziphumo ezingcono yonke imihla edlulayo kwaye isebenze ngakumbi kunokuba injalo namhlanje.
Ngokungathandabuzekiyo, itekhnoloji isendleleni yokuguquka kwaye kwiminyaka embalwa iindlela zemveli zokuvelisa amandla ziya kuyekwa ukusebenzisa ezi ndlela zintsha, ezongezelelekileyo eziluncedo kakhulu ebantwini, ziluncedo olukhulu ukulwa nongcoliseko. Ngale post, unokuqonda yonke into malunga neepaneli zelanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Iiphaneli zelanga: Yonke into ekhoyo malunga nayo